Burma Frontier Photographs 1918-1935 by James Henry Green, 1918-1935
James Henry Green wasaBritish army officer and amateur photographer whose appointment took him to the most remote hill regions of Burma between the two world wars. His fascination with the peoples living in these areas and the exploration of their ethnic differences was the motivating force behind his photographic collection of more than 1600 images. It fuelled what was to becomealifelong pursuit of anthropology.
This unique documentary work isaunique visual catalogue of early 20th century Burma and its exceptional ethnic diversity. The Burma collections of James Henry Green are placed with The Royal Pavilion, Libraries and Museums, Brighton, UK.
James Henry Green သည် ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုကြားကာလ၌ မြန်မာပြည်အစွန်အဖျား တောင်တန်းဒေသများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည့် ဗြိတိသျှကြည်းတပ်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံသမား တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနေရာများရှိ ဒေသခံများနှင့် ၎င်းတို့၏ မတူကွဲပြားသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများအပေါ် James Henry Green ၏ စိတ်ဝင်တစားရှိမှုများသည် သူ၏လက်ရာ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁,၆၀၀ကျော် စုစည်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ရသည့် နောက်ကွယ်မှ တွန်းအားတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတွန်းအားဖြင့် တစ်သက်တာ မနုဿဗေဒ ဆည်းပူးသူတစ်ဦး ဖြစ်လာရန် လိုအပ်သည့် အရာများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀ရာစုအစောပိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် မတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ ထူးခြားလှသည့် ဓာတ်ပုံစုစည်းမှုတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ James Henry Green ၏ မြန်မာပြည်လက်ရာများ စုစည်းမှုအား ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၊ ဘရိုက်တန်နယ်ရှိ တော်ဝင်ပါဗယ်လီယွန်၊ စာကြည့်တိုက်များနှင့် ပြတိုက်များတွင် ထားရှိပါသည်။